स्वर्गीय न्यायाधीश - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
जब हामी बुझ्छौं कि हामी बाँचिरहेछौं, बुनाई गर्छौं र ख्रीष्टमा छौं, एकमा जसले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो र सबै थोक छुटकारा दिनुभयो र जसले हामीलाई बिना शर्त माया गर्नुहुन्छ (प्रेरित १२:३२; कलस्सी १: १ -12,32 -२०; जोन ३:१ ---१)), हामी सबै भयलाई टाढा राख्न सक्छौं र "हामी ईश्वर संग कहाँ छौं" को बारे मा चिन्ता गर्न सक्छौं र वास्तव मा उहाँको प्रेम र हाम्रो जीवन मा निर्देशक शक्ति को निश्चितता मा आराम गर्न शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचार सुसमाचार हो, र साँच्चै यो केहि मात्र होइन तर सबै मानिसहरु को लागी राम्रो समाचार हो, जसरी हामी १ यूहन्ना २: २ मा पढ्छौं।
यो दुखद तर सत्य हो कि धेरै विश्वासीहरू अन्तिम निर्णयदेखि डराउँछन्। हुनसक्छ तपाई पनि। यदि हामी आफैंमा इमान्दार छौं भने हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी धेरै तरिकामा परमेश्वरको पूर्ण न्याय गर्न सक्दैनौं। तर हामीले अदालतको बारेमा हामीले बिर्सनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको न्यायाधीशको पहिचान हो। अन्तिम न्यायको समयमा प्रधान न्यायधीश येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ!
तपाईंलाई थाहा छ, प्रकाशको पुस्तकले अन्तिम न्यायको बारेमा धेरै कुरा बताएको छ, र हामीमध्येका हाम्रा पापहरूको बारेमा सोच्दा यसमा केही डरलाग्दो हुन सक्छ। तर प्रकाश न्यायाधीशको बारेमा धेरै कुरा छ। उनीले उनलाई बोलाउँछिन् जसले "हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र रगतको माध्यमबाट हाम्रा पापहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्छ"। येशू एक न्यायाधीश हुनुहुन्छ जसले पापीहरूलाई उहाँ यति न्याय गर्नुहुन्छ कि उहाँ तिनीहरूको लागि मर्नुभयो, र तिनीहरूको स्थानमा तिनीहरूको लागि खडा हुनुभयो! त्यो भन्दा पनि, उहाँ उसको लागि मृतकबाट जीवित हुनुभयो र उहाँलाई जीवन र बुबाको उपस्थितिमा ल्याउनुभयो, जसले उहाँलाई येशूलाई जत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। यसले हामीलाई राहत र आनन्दले भर्दछ। येशू आफैले न्यायाधीश भएको हुनाले हामी न्यायसंग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन।
परमेश्वरले तपाइँ सहित पापीहरुलाई माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै कि पिताले पुत्रलाई मानिसहरुको कारणको लागी खडा हुन पठाउनुभयो र तपाइँ सहित सबै मानिसहरु लाई उहाँकहाँ आकर्षित गर्न को लागी (यूहन्ना १२:३२) पवित्र आत्मा द्वारा रूपान्तरित हाम्रो मन र हृदय लाई विभाजित गरेर। । परमेश्वरले तपाइँमा चीजहरु खोज्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्न जुन तपाइँलाई उहाँको राज्य बाट बाहिर राख्न को लागी गलत छ। हैन, उहाँ ईमानदारीपूर्वक तपाइँलाई आफ्नो राज्य मा चाहानुहुन्छ र उसले तपाइँलाई त्यो दिशामा तान्न कहिल्यै रोक्दैन।
ध्यान दिनुहोस् कि कसरी येशूले यूहन्ना को सुसमाचार मा यस खण्ड मा अनन्त जीवन को परिभाषित गर्नुहुन्छ: "यो अनन्त जीवन हो, कि उनीहरु तपाइँलाई जान्दछन्, तपाइँ मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र जसलाई तपाइँ पठाउनुभयो, येशू ख्रीष्ट" (यूहन्ना १.17,3.३)। यो गाह्रो वा जटिल येशूलाई थाहा छैन। त्यहाँ कुनै गोप्य हात इशाराहरु को व्याख्या वा पजलहरु लाई हल गर्न को लागी छैनन्। येशूले मात्र भन्नुभयो: "मकहाँ आओ, तिमीहरु सबै जो कष्टप्रद र बोझमा छौ, र म तिमीहरुलाई स्फूर्ति दिनेछु" (मत्ती ११:२11,28)।
जब हामी परमेश्वरतर्फ फर्कन्छौं र येशू ख्रीष्टमा भरोसा राख्छौं, हामी नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्छौं। पवित्र आत्मा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ र हाम्रो पापीपनको पापी तहलाई खोप्न थाल्नुहुन्छ - पापी बानी, मनोवृत्ति, र सोच्ने तरिका - हामीलाई भित्रबाट ख्रिष्टको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्दछ।
यो कहिलेकाहीं पीडादायी हुन सक्छ, तर यो स्वतन्त्र र स्फूर्तिदायी पनि छ। नतिजा स्वरूप, हामी विश्वासमा बढ्दै जान्छौं र हाम्रो मुक्तिदातालाई चिन्न र बढि प्रेम गर्दछौं। र हाम्रो उद्धारकर्ता, जो हाम्रो न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ भन्नेबारे जति धेरै जान्दछौं, हामी अदालतलाई त्यति कम डराउँछौं। यदि हामी येशूलाई चिन्छौं भने, हामी येशूमा भरोसा गर्छौं र हाम्रो मुक्तिको बारेमा पूर्ण विश्वस्त हुन सक्छौं। यो हामी कत्तिको असल छौं भनेर होइन; त्यो विन्दु कहिल्यै थिएन। यो सधैं उहाँ कति राम्रो छ को बारे मा भएको छ। यो राम्रो समाचार हो - सबै भन्दा राम्रो समाचार सबैले सुन्न सक्छन्!